रविको नयाँ पार्टी बन्यो झनै जब्बर, जसले रविलाई यो उचाईमा पुर्याउन पर्दापछाडिबाट मेनरोल खेलेका थिए उनको पनि भयो ईन्ट्री ! | Prahar News
रविको नयाँ पार्टी बन्यो झनै जब्बर, जसले रविलाई यो उचाईमा पुर्याउन पर्दापछाडिबाट मेनरोल खेलेका थिए उनको पनि भयो ईन्ट्री !
काठमाडौँ । रवि लामिछानेलाई बहुचर्चित बनाउने कार्यक्रम हो सिधा कुरा जनतासँग । यही ब्राण्डका कारण रविले नसोचेको चर्चा र प्रशंसा कमाउन सफल भए । रविले यही चर्चा र विश्वासलाई बटुलेर राजनीतिक मैदानमा पाइला टेकेका छन् । जोहोही सफल हुनुमा त्यसको पछाडी अर्थात पर्दा पछाडी मेनरोल खेल्ने मान्छे हुन्छ । सिधाकुरालाई समेत यो उचाइमा पुर्याउन पर्दा पछाडीबाट दिपक बोहोराले मेनरोल खेलेका थिए ।
पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरे लगत्तै उनको अभियानमा लाग्नेहरुको संख्या बढ्दो छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा उनले आफू पुराना कुनै पनि दलमा प्रवेश नगर्ने बताउँदै ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ गठन गरे लगत्तै उनको सर्मथनमा हजारौँ युवाहरु सडकमा देखिएका थिए ।
यसैबिच रविका सहयात्री दीपक बोहोराले पनि टेलिभिजन औपचारिक रुपमा नै छाडेर रविकै अभियानमा लागि परेको जनाएका छन् । बिहिबार सामाजिक संजालमा एक स्टाटस लेख्दै कार्यक्रम निर्माता समेत रहेका बोहोराले भने आजबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँगको आवद्धता औपचारिक रुपमा टुंगिएको छ ।
यो टेलिभिजन बनाउँदा एक एक जना सदस्यलाई जोडेको, आफैँले बनाएको टिम छोडेर जानु मेरा लागि सहज थिएन । तर रवि दाईले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न हामी सबै सँगै हुन जरुरी छ । सहकार्य सहयोग र सद्भावका सबैलाई धेरै–धेरै धन्यवाद । मिस यु टिम भनेर लेखेका छन् ।
रविको पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि भ्रातृसंगठन र कार्यकर्तारहितसम्मको विशेषता प्रस्तुत गरेको छ । स्वयंसेवीबाट आर्थिक सहायता जुटाउने बताइएको छ । प्राइमेरी निर्वाचन हुने, युवालाई ५० प्रतिशत एकको व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था, डिजिटल डेमोक्रेसीको व्यवस्था गर्ने, परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध, भ्रातृसंगठन र कार्यकर्तारहित बनाउने रवि नेतृत्वको नयाँ पार्टीका बिशेषता हुन् ।